Calanka TV – Sawirro
Donald Trump oo laga baajiyay booqasho uu ku tagi lahaa xuduudda Waqooyiga Kuuriya: SAWIRRO
Daqiiqadihii ugu dambeeyay ayay baajiyeen lataliyayaasha Donal Trump booqasho uu ku tagi lahaa xadla Kuuriyada Waqooyi la leedahay Kuuriyada Koonfureed. Booqashadan ayaa la baajiyay xilli uu madaxweynuhu gaaraygoobta balse loo diiday in uu gaariga kasoo dago.
by calanka —	November 8, 2017 —	Sawirro
Shirkado ku loolamaya dhisidda darbiga uu ku baaqay Donald Trump ee xadka Mexico: SAWIRRO
Shirkado doonaya in ay dhisaan barbiga uu ku baaqay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump in uu ka dhiso xadka uu dalkaasi la wadaago Mexico. Shirkadahan ayaa madaxweynaha usoo bandhigay tusaale muujinaya darbiga ay shirkad walba dooneyso in ay dhisto.
by calanka —	October 29, 2017 —	Sawirro
Maamulka Donald Trump oo sii daayay 2800 oo dokuminti muujinaya dilkii madaxweyne John F. Kennedy: SAWIRRO
President John F. Kennedy and first lady Jacqueline Bouvier Kennedy walk down the steps of Air Force One as they arrive at Love Field in Dallas, Texas less than an hour before his assassination. JFK Library/The White House/Cecil Stoughton/File Photo via REUTERS[/caption]
by calanka —	October 27, 2017 —	Sawirro
Daawo sawirrada dibadbaxyadii gil-gilay Kenya ee qeybo ka mid ah dalkaasi ka baajiyay doorashada: SAWIRRO
Dalkaasi Kenya waxaa maanta ka dhacday doorasho ku celis ah kaas oo laagu tartamayay cidda ku guuleysaneysa doorashada madaxweynaha dalkaasi. Taageerayaashi mucaaradka oo doorashadaasi qaadacay ayaa waxa ay dhigeen dibadbaxyo rabshado wata kuwaas oo qeybo ka mid ah ka baajiyay doorashada.
by calanka —	October 26, 2017 —	Sawirro
Boqor sannad ka hor dhintay oo maanta si yaab badan loogu aasay dalka Thailand: SAWIRRO
Waxaa caasimadda dalkaasi Thailand ee Bangkok maanta lagu aasay boqoe Bhumibol Adulyadej oo ku dhowaad sannad ka hor ku geeriyooday dalkaasi. Boqorka ayaa waxaa “aaskiisa” oo anaa nooca danbasta laga dhigo meydka ayaa waxaa ka qeyb galay kumannaan shacab ah oo qiireysan.
Maxaad kala socotaa ciidamada Fransiiska ee ku sugan dalka Mali iyo qaabka ay ula dagaalamaan argagixisada?: SAWIRRO
Dowladda Fransiiska ayaa faragelin ku sameysay kana hortagtay duullaan ay soo qaadeen koox islaamiyiin ah oo xiriir la lahaa al-Qaacida sannadkii 2012, waxaana ay doonayeen in ay xilka ka tuuraan dowladdii xilligaasi jirtay, iyagoona inta badan dalka soo qabsaday, una harsan tahay caasimadda dalka.
by calanka —	October 25, 2017 —	Sawirro
Nolosha magaalada Muqdisho iyo muuqaalka eysan warbaahinta idiin kaga soo bandhigin: SAWIRRO
Sawirradan waxa ay ka tarjumayaan nolosha iminka ka jirta caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. Sawirrada noocaan oo kale ah warbaahinta intooda badan masoo bandhigaan oo waxaa lagaa tusaa magaalada Muqdisho dhanka xun amaba dhibka badan.
by calanka —	October 24, 2017 —	Sawirro